Toe Tet • Online Learning Platform, Personal Development Courses
Business Plan ရေးနည်း 101
Success with Memory Training
Are you ready to Join our Live Section?
ကျောင်းတဖက်နဲ့ ဂိုက်သင် အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီး၊ လစဉ်သောကြာနေ့တိုင်း မူဆယ်သွား၊
တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ရွှေလီမှာ Online Courses
တွေကို သွား download လုပ်ပြီး ပြန်လည်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကလဲ အင်တာနက်မြန်တဲ့ ရုံးကို ၇ နာရီအရောက်သွားပြီး Online Courses တွေတက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာ Online Course တွေပါ။
Akyanpay Creator Studio
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းအတွက် Business, Brand, Marketing, Sale, Training Plan တွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်။ Akyanpay Creator Studio (Akyanpay.com) ကတော့ လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် Frameworks တွေဖြစ်တဲ့ Lean Branding, One Page Marketing Plan, Lean Business Plan, Business Model Canvas, Business Plan, Copywriting framework အစအစရှိတဲ့ framework တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းထားပြီး website ပေါ်မှာ တစ်ခါတည်း plan လုပ်ပြီး ဘယ်နေရာကမဆို ပြန်လည်ရယူနိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ပြိုင်ဖက်တွေထက်နှာတစ်ဖျားသာပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်လိုသူ entrepreneur တွေအတွက် ဒီ Akyanpay Creator Studio ဖြစ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
4. Send us what you learn
လေ့လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများကို note ရေးပြီး admin@yec.edu.mm ကိုပို့ပေးပါ။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ရောက်အောင် အထောက်အကူပြုမည့် သင်တန်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
5. Earnadigital certificate
တက်ရောက်ပြီးကြောင်း Digital certificate ကို Email ပို့ပေးပါမည်။
3. Finish your lessons
Dr. Pyae Sone Ko KoMindset Advisor
One of the Best Online Learning Websites i have ever seen in Myanmar. its ease of accessibility, user-friendly Interface, affordable price of the online programs and quality of programs are unique features of Toe Tet. When i started learning from foreign online learning website "Udemy", i wished to have such kind of website in Myanmar. Now, Toe Tet did it.
Dr. Nyan Lin Htet
I love Toe Tet website . Courses are truly valuable and it is worth to learn from it . It is mostly suitable for those who are busy with works , no time to learn at business schools, centers and colleges & those who want to learn courses inashort period. Join and Try it ,my friends !
Cho Nwe Htun
When I started to consider to attend this MBTI online course, I just noticed that the payments is very fair, nearly 19,000 MMk. I considered if I read the book and find the data about MBTI, but it will not complete like this online course. It will take long time for me to know detail. This course is very useful to know yourself and to test your personality. I can learned about MBTI test details by this course. Worth it for me. Thanks
Thang Cin MangAssistant Manager
စီးပွားရေးပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ၊ အနာဂတ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်၌ ဦးဆောင်လိုသူများအနေဖြင့် Practice + Theory + Assignment များပါဝင်သည့် အတွက်ကြောင့် အမှန်တကယ် တတ်မြောက် လိုသူများ အနေဖြင့် တက်ရောက်သင့်သည့် သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်း အကြံပြု လိုက်ပါသည်။
U Soe Thu YaManagin Director at Trust Hotel Consultancy Group
Online သင်တန်းတက်ရောက်မည့် သင်တန်းသား အသစ်များ YEC ၏ Online သင်တန်းသည် အချိန်တိုအတွင်း အထိရောက်ဆုံး သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ Theory အပြင် Case Study များ Global Knowledge များဖြင့် သင်ကြားပေးသဖြင့် အောင်မြင်လိုသူတိုင်း တက်ရောက်သင့်ပါကြောင်း . . .
Dr. Loi KawGP, Health Vlogger , Online Trainer
တိုးတက် ဆိုတဲ့အတိုင်း သင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ တိုးတက် စေတဲ့ သင်တန်းတွေပဲ​ဖြစ်ပါတယ် ။ တိုးတက် မှာ Online သင်တန်းတက်တာ ၁၀ခုကျော်ပြီ ၊ အစက သေချာမသိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေဟာ တိုးတက် မှာ တက်ပြီး နောက်ပိုင်း သေသေချာချာ နားလည်သွားတယ် ။ လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအသုံးဝင်တယ် ။ ဘဝ တိုးတက်လိုသူတိုင်း တက်ရောက် ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
Pyae Phyo AungEnginner at iTN Company.,ltd
YEC ရဲ့ EBM Online Program ဟာ အချိန်တိုအတွင်း Business Management Concept တွေ နားလည်သဘောပေါက်စေမည့် သင်တန်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Theory + International Knowledge+ case study+assignment အပြင် ဆရာဖြိုးပိုင်ရဲ့ စေတနာထား သင်ကြားပေးမှုတွေကြောင့် အကောင်းဆုံးတွေကိုမှ ရွေးချယ်သူတွေအနေနဲ့ တက်ရောက်သင်ယူသင့်ပါတယ်။
စိုင်ဆိုင်မိန်းFounder & CEO ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကျွန်တော်တို့လို အလုပ်တစ်ဖက် လေ့လာသင်ယူမှုတွေတစ်ဖက်နဲ့ အလုပ်အမြဲရှုပ်သူတွေအတွက် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကို www.toetet.com လို့ခေါ်တဲ့ Online ကနေ ကျွန်တော့် လေ့လာတာများပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ အကျိုးများပါလိမ့်မယ်။
Applied Psychology for Business & Marketing ကို Toe Tet Online Learning Center မှာ လေ့လာရတာ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။ ဆရာ ဖြိုးပိုင်ရဲ့ သင်ကြားပေးမှုက Apply ပိုင်းကို အဓိက သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ပြန်လည် အသုံးချနိုင်တာကြောင့် အားလုံးအကျိုးရှိမှာမို့ လေ့လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။